Mozilla inotenga homwe kuti iise mukati mayo zvigadzirwa | Linux Vakapindwa muropa
Isu tinoziva kwenguva yakareba hukama hwepedyo pakati peMozilla nePocket kuverenga sevhisi. Zvakanyanya zvekuti kune akati wandei vhezheni, Firefox inosanganisira Pocket natively. Iri rave dambudziko kune vazhinji vateveri vemahara software uye marezinesi emahara, marezinesi ayo mafaira mazhinji aisatevedzera. Asi zvinoita sekunge izvi hazvichazove dambudziko.
Sezvakataurwa neMozilla Foundation pachayo, Pocket nekambani yake zvakatengwa neMozilla Foundation. Nemutengo watisingazive parizvino, asi watove weMozilla.
Panguva ino, maererano las palabras weMozilla Foundation, iyo kambani Homwe icharamba yakazvimirira Uye kunyangwe ichave iri inotsigira yeMozilla, haizove nechokuita nezvimwe zvakasara zveMozilla zvigadzirwa. Gare gare, Mozilla yakasimbisa kuti sevhisi inopinda iyo Open Source chikuva urikugadzira, ndiko kuti, ichave yemahara uye yakavhurwa sosi.
Homwe icharamba yakazvimirira kunyangwe ichizopedzisira yave kuita seFirefox
Iye zvino Pocket ine vanopfuura mamirioni gumi vashandisi vanoshanda uye vanopfuura mamirioni makumi matatu akaverengwa kuverenga. Pamusoro peMozilla Firefox, sevhisi yekuverenga sevhisi inoenderana nemapuratifomu akasiyanasiyana enhare uye nemabhurawuza ewebhu akadai seChannel, Vivaldi kana forogo dzeFirefox. Mune mamwe mazwi, shanduko iyi mukusimudzira kwayo pamwe nekutenga uku kuchabata zvinopfuura chikuva chimwe uye vanopfuura mumwe mushandisi vanoshandisa zvese zviri zviviri Pocket uye Mahara Software.
Zvinosuruvarisa hatizive kuti Pocket ichave Mahara software, chimwe chinhu chakakosha kupfuura huwandu hwemari yakabhadharwa neMozilla. Nekudaro, zvese zvinoratidza kuti gore risati rapera tichava nekubatanidzwa kweiyi nyowani sevhisi yekuchengetedza kuverenga uye mapeji ewebhu muSiseko. Zvisinei Ramangwana raPocket richava nani neMozilla here kana kuti richava neremangwana rakafanana nezvimwe zvigadzirwa zveSiseko? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla inotenga homwe kuti iise mukati mayo zvigadzirwa
Ndinovimba havazi kuzvimonera, ini ndaitarisira kuti Flipboard inotenga Pocket. Kunyangwe ini ndichishandisawo Firefox, ini ndinogara ndichishandisa Pocket kubva kuFlipboard.